I-Beatles-With The Beatles
I-albhamu yabo yesibili yase-UK iphinda iya kwiNombolo enye kwiitshathi
Le yiyona yeLesti yeLP ye sibini kwi-UK Parlophone ilebula. Yakhishwa eBrithani ngosuku olulungileyo-uLwesihlanu, ngo-22 Novemba, 1963, umhla uMongameli uJohn F. Kennedy wabulawa eDallas, eTexas.
Esi siganeko saba nefuthe kwikamva le-Beatles e-USA. Ngelo xesha babengaziwa kwiMelika, kodwa iindaba zeendaba zeTV ezibonisa impumelelo yazo enkulu kwenye indawo kwihlabathi kwakufuneka zivezwe kuzwelonke ngaloo busuku obufanayo.
Ngokuqinisekileyo ibali kwiqela elibethayo elivela eLiverpool liye lahliwa kwaye ukuhanjiswa kodongeni kwindonga yeziganeko ezimbi zase Dallas. Kuyaqondakala ukuba nabani na umntu owayefuna ukubona nokuva ngaloo mini ibali elikhulu kwihlabathi-ukufa okukrakra kweJFK.
Inkqubo yeendaba yeBeatle yayisisigxina. Enyanisweni akuzange kubonwe kwizikrini zethelevishini zase-US de iiveki kamva, ngelo xesha i-Beatles yayivele yenze ukuphumelela kwayo okukhulu kwi-States ngezinye iindlela, ezibonakalayo kwiprogram ehlukeneyo ehlukeneyo, i-Ed Sullivan Show. Ngendlela engaqhelekanga yayinokuba iBeatles ibonakaliswe kwangaphambili kule ndaba ibonisa eU.S. ingaba ingazange ifumaneke impendulo efana neyona mva yafumana. Iprogram yeSullivan yaba yinto enamandla kakhulu.
Emuva e-UK, kunye neBeatles baya kwiNombolo enye kwiitshathi kwaye bahlala khona de kube ngo-Apreli, ngo-1964. Yatshengisa ukuqala kwento eyaziwa ngokuba yiBelemlemania eBrithani, uhlobo olutsha lwe-mania oluza kuhlasela lonke ihlabathi.
Ngelo xesha i-magazine music ehlonishwayo i- New Musical Express yabhala yathi: "Ukuba kukho nawuphi na umtshayi ongumtshabi oshiya eBrithani, ndithandabuza ukuba baya kuhlala bengashukumi emva kokuva kunye neBeatles . Ndiya kufikelela kude apha: ukuba ahlale engaphezulu kwe-NME LP Chart ubuncinane kweeveki ezisibhozo, ndiya kuhamba ngezantsi kunye neLiverpool Lime Street ephethe i-"Ithiyile i-Beatles" yesikhwama-sandwich " .
Kwakungadingeki ukuba akwenze.
I-albhamu iyaqala, njengokuba i-LP yabo yangaphambili Ngicela nceda , nenombolo ye-tempo enokukhawuleza ingqalelo kwaye ayivumeli ukuhamba. Kwimeko apho, "Awuyi kuba Mde", isiqalo saseLennon / McCartney esaphinda sichaza igama lophawu loNyaka uBeetle "Ewe, ewe, yeahs", kodwa ngeli xesha kwifowuni, ne-response response. Kukho uvuyo kulo myalezo orekhodiweyo ophuma nje kwisithethi. Ukuba kukho enye into eyenziwa nguGeorge Martin ophumelele ngempumelelo kunye nee-Beatles kwakufuneka athabathe kwi-studio yabo isandi esinamandla "sokuphila". Kuphuma nakwii-grooves. Ngaphezulu kweminyaka engamashumi amahlanu kule ngoma iqhubeka ihlaziya.
Okulandelayo "Yonke into endiyenzayo ukuyenza," enye into eyayiqalayo, kodwa ihamba kancane kwi tempo ngeli xesha, kwaye kwakhona ngezwi likaJohn Lennon. Lo nguLennon ukuhlawula isithixo - omnye uSmokey Robinson .
Ingoma yesithathu kwi -Beatles iyinombolo kaPaul McCartney, ethembekileyo kakhulu "All My Love". Ingoma ibonisa injabulo yeBelemlemania, kodwa yinto ingoma eyafika kuPawulos ngelinye ilanga ngelixa wayigeza, kwaye wayibhala phantsi njengombongo. Ngokweqile, le ngoma yokuqala eyayiqhutyelwa yiBeatles kwi-Ed Sullivan Show ngo-1964 ngaphambi kokuba abaphulaphuli baqikelelwa babebukeli bezigidi ezingama-73.
UGeorge Harrison ufumana ingoma yakhe yokuqala okokuqala kule LP. "Ungangikhathazi" unyantya yonyani-kunye neyinto enhle nantoni na into ethi uLennon noMcCartney babhale. UGeorge waqamba le ngoma ngexesha lokutyelela ngo-1963, kwiNdwendwe yeNkundla yeNdwendwe kwisixeko saseBournemouth. Ngokuqinisekileyo iHarrison yayingavumiyo ingoma, ukubhala 'kwi-biographie' yam I-Mine "Kungenzeka ukuba yayingazange ibe yingoma yonke, kodwa ibonise ukuba konke okufuneka ndiyenze kwakuqhubeka ndibhala kwaye ekugqibeleni ndibhale into enhle ".
"Umntwana Omncinci" wayebhalwe okokuqala kwiRingo Starr ukuba enze, kodwa ingoma yaphela ngokuba nezwi likaJohn Lennon (uRingo esikhundleni salolu hlobo "Ngifuna Ukuba Ngumntu" kule albhamu). Kufuneka kuthathelwe ukuba le yinto engeyona enye yeetyulane ezinkulu. Kuthathwa ngabagxeki abaninzi njengengoma yomgca we-albhamu.
Oku kulandelayo kulandelelana kwezi zithathu. Le nto yayenziwe ngamaBeatles iminyaka njengenxalenye yesigaba sabo sokubonisa, kwaye ngenxa yoko bahlaziywa kakuhle kwaye bajwayelene nebhodi. Ngamnye ibetha ngokuchasene nokulandelayo.
Okokuqala ingoma kaMeredith Wilson yase Broadway "Kuze Kubekho" (ukusuka kumculi womculo we-1957 weMusic Man ) kunye noPaul ngezwi; Emva koko kuza ingoma yaseMotown eyenziwa yiqela leentombazana i-Marvellettes, " Nceda Mister Postman " (ebizwa ngoYohane). Ilandelwa ngu-1956 u-rocker Chuck Berry, "Roll Over Beethoven" (ngezwi elikhulu elivela kuGeorge Harrison). Ingoma ngayinye, ngendlela yayo, i-Beatles ihlawula umvuzo kwezinye zeempembelelo zakuqala. Kwinkqubo babonisa ububanzi bezitayela eziza kulungiswa.
"Ndibambelele" ngenye into eyenziwa nguPaul McCartney. Ingqungquthela yengoma ephosekileyo yokunyaniseka, kodwa isineqela elinamandla lokubetha, eliqhelekileyo lexesha. Nangona ingoma ayiyinto ekhethekileyo ayikho into embi.
Enye into endiyibambe ngayo "yile nxalenye yeBeatle. Ingoma kaSmokey Robinson kunye neNgoma yeMimangaliso, kunye noJohn Lennon ngezwi. Le nguqulo yeBeatle isondelene kakhulu neyokuqala, kodwa iyahluke ngokwaneleyo ukuba yenze enye yezona zikhuselo ezinkulu. Njengoko sele kukhankanywe, uSmokey Robinson wayengumnye wezithombe eziphambili zikaLennon ngelo xesha.
Ingoma elandelayo, "Ndifuna Ukuba Ngumntu Wakho" ekuqaleni yayinikwe kwi- Rolling Stones ngaphambi kokuba iBeatles kamva igqibe ukurekhoda inguqulelo esiyiyo apha noRingo njenge-vocalist.
Ukuguqulwa kwamatye, apho uYohane noPawulos baqeda ukubhalwa phambi kukaMick Jagger noKeith Richards, beza kwiikhathi zase-UK. Oku kwakunomdla okwaneleyo ukukhuthaza uJagger noRichards ukuba baqale ukubhala izinto zabo zokuqala. Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali.
"UMtyholi entliziyweni yakhe" ngumsindo wesithathu waseGeorge Harrison nge- The Beatles . Ingqungquthela engavaliyo yoma ingoma eyabhalwa ngumculo we-US kunye neqela le-blues I-Donays. AmaBeatles mhlawumbi beva okokuqala ingoma yabo kwi-NEMS, ivenkile yokugcina ephethe umphathi wabo uBrian Epstein, ophethe izihloko ezininzi zase-US.
"Ngexesha lesibini" lenye iLennon / McCartney eyayiqalwa nguYohn Lennon, olawulayo le albhamu yonke. Le yimizila eya kukhishwa nguWilliam Mann, i -Times yaseLondon umhlaziyi womculo ngo-1963, owabhala ngemimiselo ekhangayo ye "Aeolian cadences", kwaye wathi wayibonakalisa ikhono likaBeatles lokuba '... cinga ngokufanayo kunye nomculo, ngoko ngokuqinisekileyo yiyunithi ye-tonic eyisixhenxe kunye neyesithoba ezakhiwe kwiingoma zazo. ULennon akazange akholelwe udumo olunjalo ngelo xesha, ethi wayezama nje ukubhala ingoma uSmokey Robinson unokuziqhayisa. Nangona kunjalo, mhlawumbi wayekholiswa kukuba umsebenzi wakhe ufumene uhlalutyo lwengqondo kunye nokwazisa. Mhlawumbi uMann wayegqitywe ngokugqibeleleyo. Kubonakala ngathi umculo weBeatles uya kuqhubeka kwaye ujikeleze ubuncinane nje ngoBeethoven, u-Chopin noTchaikovsky.
I-powerhouse powerhouse kufuphi nenye ikhava ebizwa ngokuthi "Imali (Yilokho Ndiyifunayo)".
I-Motown classics, ebhaliwe nguBerry Gordy noJanie Bradfield, kwaye ekuqaleni yayiyi-hit ngo-1960 ngo-Barrett Strong. Ewe, i-cover, kodwa oh yintoni inqwelo. Njengokuba wayedlule kwangaphambili kuNceda Nceda Ndifake "nge-Twist and Shout", uJohn Lennon ngokuqinisekileyo uyinikela konke oko. Aba Beatles ngokwenene banalo kwaye bakwenza ngokupheleleyo.
Ifoto yokugaya ifowuni esetyenziswe kwi- The Beatles ifanele ikhankanywe. Kuthatyathwe nguRobert Freeman kwaye sele ikhutshwe ngamaqela amaninzi, kodwa akazange athengwe. Esi sikhokhelo saqhekeza umhlaba omtsha wokurekhoda kweso sithuba. Liyinkimbinkimbi kwaye libuqilima ngeBeatles ebomvu, ekhuselekileyo kunye neyobuhlungu. Isithombhalo sisicacileyo sokuba i-band yabona njengento engaphezu kwebala lokubetha. Baye kwinqanaba elibhekiselwe ngakumbi kunye nezobugcisa. Umfanekiselo ofanayo, nge-toning ehlukileyo, isetyenzisiwe kwi-US LP Hlangana neBeatles , (equlethe iingoma ezithoba kwi -Beatles ).
Ndingayigqoba Njani Ukugqoka I-Skating Skating Skating?